साढे ५ अर्बभन्दा बढीको शेयर कारोबार, परिसूचक ३.७० अंक बढ्यो
पुस २७, काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ३ दशमलव ७० अंकले बढेर २ हजार २३९ दशमलव ४२ विन्दुमा पुगेको छ ।
यो दिन २ हजार २६४ दशमलव २७ विन्दुदेखि खुलेको बजार २ हजार २६६ दशमलव ४५ विन्दुसम्म पुगेको थियो भने २ हजार २२९ दशमलव १३ विन्दुसम्म झरेको थियो । यो दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स शून्य दशमलव ९६ अंक बढेर ४२९ दशमलव ३९ विन्दुमा पुगेको छ ।
आइतवारको तुलनामा परिसूचक बढेपनि कारोबार रकम भने घटेको छ । आइतवार रू. ६ अर्ब ३२ करोड ६६ लाख ४६ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएकोमा सोमवार यो रकम रू. ५ अर्ब ५२ करोड ४८ लाख ३२ हजार रहेको छ । सोमवार २०८ ओटा कम्पनीको ४८ हजार ५३ पटकको व्यापारमा उक्त रकम बराबरको १ करोड ३५ लाख ६० हजार ७८३ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो ।
यस दिन सिद्धार्थ बैंकको सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ । बैंकले प्रस्ताव गरेको १२ प्रतिशत बोनस र ३ प्रतिशत नगद लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन भएकाले पनि कारोबार रकम बढेको हो । सिद्धार्थ बैंकले कुल १५ प्रतिशत लाभांश र आगामी साधारण सभाका लागि पुस २८ गते मंगलवार बुक क्लोज गर्दैछ ।
बुक क्लोजको अघिल्लो दिन उक्त कम्पनीको रू.४२ करोड ६२ लाख १२ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । यो दिन कम्पनीको न्यूनतम रू. ४६८ देखि अधिकतम रू. ४७९ सम्मको मूल्यमा शेयर कारोबार भएको छ । उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य पनि प्रतिकित्ता रू. ६ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ४७२ पुगेको छ ।
सामान्य अंकले बढेको बजारमा आरम्भ चौतारी लघुवित्तसहित चार ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य यो दिन ९ दशमलव ९९ प्रतिशतले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ८९२ कायम भएको हो ।
त्यस्तै नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकको ९ दशमलव ९३ प्रतिशतले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ७६४, युनाइटेड फाइनान्सको ९ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढेर अन्तिम मूल्य रू. २९३ र कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंकको ९ दशमलव ७३ प्रतिशत बढेर अन्तिम मूल्य रू. २८२ पुगेको छ ।
यी कम्पनीसहित ९७ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य यो दिन बढको छ भने ८४ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी २७ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य स्थिर रहेको छ । सर्वाधिक मूल्य मल्टिपर्पस फिनान्स कम्पनीको घटेको छ । उक्त कम्पनीको ५ दशमलव ९५ प्रतिशतले मूल्य घटेर अन्तिम मूल्य रू. १५८ मा झरेको हो ।
सोमवार कारोबारमा आएका १२ ओटा समुहमध्ये पाँच ओटा समूहको परिसूचक घटेको छ भने सात ओटा समूहको बढेको छ ।
यस दिन व्यापारिक समूहको शून्य दशमलव ५२ प्रतिशत, होटलको शून्य दशमलव २४ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव ७२ प्रतिशत, अन्यको शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत र लघुवित्तको शून्य दशमलव २७ प्रतिशतले परिसूचक घटेको हो ।
यो दिन निर्जीवन बीमा समूहको १ दशमलव ७५ प्रतिशत, वित्त समूहको १ दशमलव २६ प्रतिशत, विकास बैंकको १ दशमलव २४ प्रतिशत, जीवन बीमा समूहको १ दशमलव १६ प्रतिशत, बैंकिङ्को शून्य दशमलव १७ प्रतिशत, जलविद्युतको शून्य दशमलव २ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।